PHOTOS ။ Liam Payne သည်သူ၏ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ2သန်း၏တန်ဖိုးကိုလျှော့ချရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်။
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "PHOTOS ။ Liam Payne သည်သူ၏ကာလီဖိုးနီးယားရှိ2ဒေါ်လာဒေါ်လာသန်းတန်ဖိုးကိုလျှော့ချရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်။
PHOTOS ။ Liam Payne သည်သူ၏ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ2ဒေါ်လာတန်ဖိုးကိုဒေါ်လာသန်းချီလျှော့ချခဲ့သည်
Liam Payne ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိသူ၏အိမ်၏စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က One Direction ၏အဆိုတော်သည်သူ၏ villa ကို California, Monte Nido တွင်ရောင်းချခဲ့သည်။2ဟက်တာနီးပါးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုနှင့် 900m2 ၏အိမ်တစ်လုံးသည် 10 ရှိဒေါ်လာသန်းသန်းတန်ဖိုးရှိအိမ်တစ်အိမ်နှင့် 2015 ရှိသူ၏အချိန်ကတည်းကသူ၏အချိန်ကတည်းကဝယ်ယူခဲ့သည် Cheryl Cole ကို, အ သူ့သား Bear ၏အမိ။.
အတွင်းပိုင်းတစ် spa, ရေကန်ကြီးတစ်ခု။ အဖြူရောင်ကြွေပြားများ၊ အိပ်ခန်းငါးခန်း၊ ရေချိုးခန်းရှစ်ခန်း၊ ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခန်း၊ အားကစားရုံတစ်ခုနှင့်အားကစားခန်းမများပါ ၀ င်သည်။ အပြင်ဘက်တွင်စပျစ်ဥယျာဉ်များ၊ ပြင်ပခန်းမတစ်ခု၊ အသားကင်ဆိုင်တစ်ခန်း၊ အိမ်စောင့်အိမ်တစ်အိမ်နှင့်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကြီးမားသောအိမ်များဖြစ်သည်။ အဆင်ပြေခံစားရရန်ကြီးမားသောနေရာများ။
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိသူ၏ကောင်းမှုများကိုဖယ်ရှားရန်ဗြိတိသျှအဆိုတော်ကစျေးနှုန်းကိုလျှော့ချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် 13,99 သန်းဒေါ်လာအစား Liam Payne အရောင်းအဝယ် 11 သန်း။ ဤအချိန်ကိုသူကိုင်ဆောင်မည်လား။
သတိပေးချက်တစ်ခုအဖြစ်, Liam Payne သူကထင်ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့သည်။ အိမ်သရဲခြောက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ယခင်ပိုင်ရှင်များသည်။ မင်းမယုံဘူးဆိုရင်မင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ One Direction အဖွဲ့၏ကြယ်ပွင့်ဟောင်းကပြောကြားသည်။ ဒါပေမယ့် Cheryl ကအပေါ်ထပ်အိပ်ခန်းမှာအိပ်ချင်နေတော့ရုပ်ရှင်ရုံမှာအိပ်ခဲ့ရတယ်။ " စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလိုက်တာ!
Arabella Combet ဒါရိုက်တာစလိုက်ရှိုး
ဘုရင်မကြီး၏မလိုလားအပ်သော guests ည့်သည်များအား“ ထူးခြားသော” နည်းလမ်းဖြင့်ကုသသည်။